Igwe Igwe Na-eyiri Ahụ: Thatkpụrụ nke ga-enyere aka n'ụlọ ọgwụ - OMG Solutions
E webatala kamera ndị na-eyi ahụ n'ụlọ ọgwụ iji meziwanye nchekwa maka ndị ọrụ ahụike. Emere igwefoto iji zipu ozi doro anya nke enweghị ndidi nye ndị na-emegbu ma ọ bụ wakpo ndị ọrụ n'ụlọ ọgwụ.
ndị a ngwaọrụ na-enye nkọwa ka ukwuu banyere mmekọrịta dị n'etiti ndị ọrụ ụgbọ ala na ndị ọrịa. Paramedics na-etinye onwe ha mgbe niile n'ọnọdụ ndị siri ike ma dị egwu. Igwefoto nyere aka na ndị ọrụ uwe ojii na-ahazi iji hụ na emere ihe n'esoro mpụ ọ bụla megide ndị ọrụ ma ọ bụ ntụkwasị obi ahụ. Igwefoto ahụ na-enyere aka ebe a site na ịnye vidiyo vidiyo anaghị ele mmadụ anya n'ihu na nke echekwara maka mmemme emere ihu na ihu ihu. A na-echekwa vidio vidiyo na kaadị SD echedoro nke enwere ike iji ya mee ihe dị ka ihe akaebe a nabatara n'ụlọ ikpe.
Givot kwuru “Mgbe mmadụ nọ n’ihu ọha, ọ nweghị atụmanya nzuzo, yabụ ndekọ vidio n’ihu ọha abụghị nsogbu. Ma mgbe mmadụ na-ekwurịta okwu na onye nlekọta ahụike, a na-atụ anya ihe nzuzo, ".
Otutu nke ndị ọha na eze kwenyere na ị ga-etinye igwefoto ahụ na ha ga-echegbu onwe ha na ọ ga-abụ na onye na-enweghị ikike, ndị ọzọ nwere ike ịnweta ozi nkeonwe ha, na ha ga-echegbu onwe ha maka ịkpa ókè ga-eme n'ọdịnihu n'ihi ngosipụta nke ozi ha. Ọtụtụ ndị dọkịta ekwetaghị na kamera ahụ ga-emebi mmekọrịta dọkịta na ọrịa mana ha ga-echegbu onwe ha maka nchekwa nke ozi ndị ọrịa ha. N'ozuzu ya, ma ndị ọha na eze na ndị dọkịta kwadoro maka mmejuputa sistemụ ahụ a na-eyi n'ahụ, na-atụle na uru ndị dị na ya dị mkpa karịa ihe egwu dị na ya. Otutu ndi mmadu kwenyere na ndi ochichi kwesiri inwe ohere inweta data ebe ndi oru nlekota oru, ndi ogwu ogwu, ndi oru nyocha, na ndi okacha amara nke ozo kwesiri inwe uzo.
Emechaa ule na ngalaba nlekọta ahụike ọgụgụ isi, gọọmentị chọrọ ka ndị ọrụ ahụike jiri igwefoto. N’afọ 2014, ndị nọọsụ a nwalere iji kamera ndị nọ n’ahụ na-ebu ụzọ eleba anya na ngalaba abụọ na Broadmoor, ụlọ ọgwụ mgbaka dị elu na Crowthorne, Berkshire. Ihe nkiri a nyere ihe akaebe iji kwado ikpe na-esote ihe ike na-eme ebe ahụ na obere mbelata nke mwakpo ndị ọrụ. Ọzọkwa, enwere “mbelata pụtara ìhè na mmekpa ahụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya”, dịka onye na-ekwuchitere West London NHS Trust, nke na-agba Broadmoor si kwuo.
Morris, A., Mee 30, 2019. Express & kpakpando. [Na ntanetị]
Nzuzo 7577 1 Echiche Taa